Puerto Rico dia nilaza hoe 'misaotra anao' roa taona taorian'ny rivodoza Maria
Home » Toerana fitsangatsanganana » Puerto Rico dia nilaza hoe 'misaotra anao' roa taona taorian'ny rivodoza Maria
Androany roa taona lasa izay Rivo-doza Maria, ary Fizahan-tany any Puerto Rico ny vondrom-piarahamonina dia te hiteny MISAOTRA anao amin'ireo mpandeha rehetra izay nanampy an'i Puerto Rico hanana taona nahavaky firaketana hatreto. Tamin'ny fidiram-bolan'ny fizahan-tany isan-taona sy ny fahatongavan'ireo mpandeha amin'ny toerana avo indrindra, ny indostrian'ny fizahantany, iray amin'ireo jiro manjelanjelatra ao Puerto Rico, ary tantara mahomby tokony hozaraina, dia nahatonga fiverenana tantara ary tsy natanjaka velively.
Mamorona horonantsary antsoina hoe “Misaotra avy any Puerto Rico”, Discover iray avy amin'ny tantara, ary isaorana avy any Puerto Rico izay miankina amin'ny fizahan-tany ny Discover. Mampamirapiratra ny maha-zava-dehibe ny fizahan-tany sy ny fiantraikany amin'ny toekarena eo an-toerana izy io, ary mampiseho ny fiatraikany amin'ny fitsidihana ny Nosy. Ny tantaran'i Puerto Rico dia iray amin'ny fitombenana, indrindra eo amin'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana, ary ireo izay misy fiatraikany amin'ny fizahan-tany isan'andro. Ny kinova somary lava kokoa amin'ity horonan-tsary ity dia nivezivezy teto ihany koa.
• Miarahaba ireo mpitsidika maherin'ny 4M isan-taona, Puerto Rico dia eo an-dàlam-pandrosoana hahatratrarana taona iray mamaky firaketana amin'ny taona 2019.
• Raha ny filazan'ny CTO, ny fizahantany eto amin'ny Nosy dia niaina fitomboana 62.3% tao anatin'ny 6 volana voalohany tamin'ny 2019.
• Mahazo sitraka 4X haingana kokoa i Puerto Rico noho ny New Orleans aorian'ny Katrina.
• Ny fidiram-bolan'ny YTD dia avo indrindra.
o Jan - apr. 2019 ny fandaniam-bolan'ny trano fandraisam-bahiny / hofan-trano tsy miankina natambatra dia nahatratra $ 373.6M, avo indrindra tao anatin'ny 8 taona, ary fiakarana 12.4% raha oharina amin'ny 2017 talohan'ny Maria. Ny ambiny '19 dia mamandrika 24.1% avo kokoa noho ny '18 ho an'ny hotely.
o Janoary - Ny fangatahan'ny trano fandraisam-bahiny tamin'ny volana Jona dia nampiseho fitomboana lehibe, miaraka amin'ny trano fandraisam-bahiny nentim-paharazana / hofan-trano tsy miankina, latsaky ny 2% ny taha any Puerto Rico amin'ny taona 2017.
• Ny lisitra YTD dia mihoatra ny nananan'ny Nosy.
o Amin'ny ankapobeny, ny isan'ny isan'alina amin'ny trano fandraisam-bahiny sy ny hofan-trano tsy miankina amin'ny Q1 dia nitombo 17% tamin'ny taona 2018, izay niteraka ny fangatahana Q1 avo indrindra amin'ny alin'ny efitrano voarakitra tao Puerto Rico.
o Pôrtô Rikô no nibata ny lisitr'ireo toeran-dalamby Airbnb 10 lehibe indrindra tamin'ny fahavaratra izao.
Fidirana amin'ny rivotra
• Ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena San Juan (SJU) dia nametraka firaketana an-tsoratra tamin'ny volana Jona ho an'ny ankamaroan'ny olona tonga tamin'ny tantaran'ny volana, mihoatra ny rakitsoratra teo aloha hatramin'ny Jona 2017.
• Nandritra ny 8 volana voalohan'ny taona 2019, ny Seranam-piaramanidina Iraisampirenena San Juan (SJU) dia nahavita nitsambikina 11.4% ny fifamoivoizana an-tsokosoko, izay maneho mpandeha mihoatra ny 6.5M.
o Ny fahatongavan'ireo tonga tao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisampirenena San Juan (SJU) dia nahita fitomboana 7.6% raha oharina tamin'ny Aogositra 2018, miaraka amina mpandeha 815.043.
• Ny seranam-piaramanidina Aguadilla dia nametraka firaketana ny mpandeha tsirairay sy ny marimaritra iraisana ho an'ny volana Janoary - Aprily, nahatratra mpandeha 251,898 98,271, fiakarana 2018 XNUMX raha oharina tamin'ny vanim-potoana mitovy amin'ny taona XNUMX. Ity dia famantarana lehibe amin'ny fitomboana satria manitatra ny fahaizan'ny mpitatitra.
• Ny vinavina ho an'ireo mpandeha sambo fitsangantsanganana amin'ny 2019 dia antenaina hamaky firaketana ho an'ny mpandeha 1.8M.
• Ny isan'ny janoary 2019 dia taratry ny fitomboan'ny 28.9% ny mpitsidika tamin'ny taona lasa.
• Nisy fiakarana 56.6% ny mpandeha an-dranomasina niondrana an-dranomasina raha oharina tamin'ny volana Jan.
• Ny Ivotoerana Fivoriambe any Puerto Rico, ivon-toeran'ny fihaonambe mandroso indrindra any Karaiba, dia niaina ny taona nahombiazany indrindra tamin'ny tantarany 14 taona nandritra ny taom-piasana 2018-2019. Nahita izany:
o Fisondrotana 26% ny isan'ny mpanatrika (mpitsidika 644,000) noho ny salanisa 13 taona teo aloha.
o 96% ny fanamarihana ny fahafaham-po ny mpanjifa amin'ny ankapobeny miaraka amin'ny fiakarana 21% amin'ny hetsika rehetra.
o hetsika 417 raha ampitahaina amin'ny salanisa 13 taona teo aloha.
• Ho fanampin'izany, amin'ny alàlan'ny volavola manan-tantara 3 taona, ny varotra vondrona eto amin'ny Nosy dia mihoatra 212% ho an'ny taona 2020.